Nagarik News - मिडियाले मलाई 'फ्रि रेट हर्ट प्रपटी' बनाइदियो : साहाना [भिडियो]
12 May 2016 | 18:51pm
तस्बिर : प्रबिन कोइराला
'नमस्ते टिभी शो' कस्तो खालको कार्यक्रम हो? नियमितरुपमा विषयवस्तु छनोट कसरी गनुहुन्छ?
'नमस्ते टिभी शो' एक रियालिटी शो हो। दिनभरको थकानबाट केहीबेर सबैलाई मनोरञ्जन दिन एनटिभी प्ल्सबाट हरेक दिन साँझ ५ देखि ६:३० सम्म प्रसारण हुने यस शोमा सम–सामाजिक विषयवस्तुले प्राथमिकता पाउने गरेको छ। मनोरञ्जनात्मक रियालिटी शो भएकाले सबैलाई केहीबेर रमाइलो गराउन नयाँ हरेक दिन विषयहरु छनोट गछौं।
तस्बिर : निकेश कक्षपति
अहिलेसम्म दर्शकहरुले कस्तो खालका प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्?
नेपालमा टिभीहरुको संख्या धेरै भएकाले ५ देखि ६:३० को समयमा एकैखालका शोहरुभन्दा हामीले नयाँपन दिने कोशिस गरेका छौं। त्यसलै दर्शकहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं। नेपालमा प्रसारण हुने उत्कृष्ट पाँच कार्यक्रममा 'नमस्ते टिभी शो' कार्यक्रम परेको छ।
'नमस्ते टिभी शो' कार्यक्रमले चारसयभन्दा बढी एपिसोड गरिसक्यो। हालसम्मको प्रोडक्सन खर्च कति भयो? अन्यभन्दा यो शो किन फरक होला?
अहिलेसम्म 'नमस्ते टिभी शो'को खर्च एक करोडमाथि पुगिसकेको छ। नेपालमा फ्लेक्स राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैलीलाई तोडर ३२ लाख हाराहारीको स्टेज तयार गरेका हौं। त्यसबाहेक भिजुअलको गुणस्तरमा मेहेनत गरेका छौं। २२ जनाको टिमवर्कले कार्यक्रमको गुणस्तरमा देखिएको छ। हामीले दर्शकलाई विषयवस्तु छनोट गर्न स्वतन्त्रता दिएका छौं। त्यसबाहेक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको नेपाली सेलिब्रेटीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेखालका प्रश्नहरु समेट्ने गरेका छौं। कार्यक्रममा नयाँपन दिन विभिन्न सेसनहरु समावेश गरेका छौं। हिजोबाट नेपाली म्युजिकलाई प्रवर्द्धन गर्न 'नमस्ते लाईभ' नामक सेसन थपेका छौं।
तपाईँको विचारमा एउटा राम्रो प्रस्तोतामा हुनुपर्ने विशेषता के के होलान्? 'नमस्ते टिभी शो' को तपाई प्रस्तोतामात्र नभएर सिइओ समेत हुनुहुन्छ। सबैलाई कसरी व्यवस्थित गरिरहनुभएको छ?
सुरुमा लाइभ शो गर्दा केही हतास महसुश गरेको थिएँ। नियमित कार्यक्रम गरिरहँदा आफ्नोपनलाई प्रवर्द्धन गरिरहेँ। त्यसैले राम्रो प्रस्तोता आफ्नो सिग्नेचर स्टाइल नियमितता दिने गरेका छन्। काममा रमाएर रियल कुरालाई जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्ने खुबी हुनुपर्छ। एउटा राम्रो कामकोलाई टिमवर्क हुनु जरुरी छ। कहिलेकाँही कोही साथी आएनन् भने उनीहरुको काम म आफैँले गरिदिने गरेको छु।
मिस नेपाल २०१० मा फस्ट रनरअप भएपछि विभिन्न स्क्यान्डलमा मिसिनुभयो? किन?
मलाई मिडियाले फ्रि रेट हर्ट प्रपटीको रुपमा स्थापित गरिदिएका छन्। मिस नेपालको यात्रापछि धेरै काममा सक्रिय भएर लागिरहेको छु। मैले गरेको कामभन्दा मिडियाले मेराबारेमा मनपरी समाचार र हेडलाइन लेखिदिएका हुन्।
'नमस्ते टिभी शो'मा अधिकांश सेलिब्रेटीहरुमात्र देखिन्छन्। कार्यक्रमको चर्चाको लागि सेलिब्रेटीलाई गेस्ट बनाउनुभएको हो?
सबै क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गरिरहनुभएको व्यत्तित्वहरु 'नमस्ते टिभी शो'मा देखिनुहुन्छ। नेपालमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा सक्रिय सेलिब्रेटीहरुको क्रेज भएकाले उहाँहरुले गरिरहनुभएको गतिविधिलाई 'नमस्ते टिभी शो'ले प्रोत्साहन गरेको हो।
'गुडवाई काठमाडौं' र 'कलिउड' फिल्ममा देखिनुभएको तपाईँ एक्कासी फिल्म क्षेत्रबाट टाढिनुको कारण केही छ?
वास्तवमा मलाई फिल्म खेल्ने र अभिनय गर्नेमा कहिल्यै रुचि भएन। 'गुडवाई काठमाडौं' र 'कलिउड' मा केही दृश्यमा मात्र म देखिएको हुँ। फिल्मका अफर अत्याधिक आउँछन्। कथा पनि सुन्दा राम्रो लाग्छ। रुचि नभएर फिल्म क्षेत्रबाट केही पर बसेकी हुँ।
सामाजिक सञ्जालभित्रको इन्स्टाग्राममा सक्रिय भए पनि खासै फ्यानलाई प्रतिक्रिया दिनुहुन्न? किन?
फोटोग्राफीमा रुचि राख्ने र मैले गरिरहेको कामबारे फ्यानहरुले जानकारी गराउन इन्स्टाग्राममा सक्रिय भएकी हुँ। सबैले नियमितरुपमा प्रतिक्रिया दिन थाले भने दिनभर त्यसैमा व्यस्त हुनपर्ने हुन्छ।
« को 'गुड किसर'? विवाहसँगै गरिमाले गरिन् सात लाखको अक्षय कोष स्थापना »